पुस २५ / काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आफूलाई गिरफ्तार गर्न अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल आएका प्रहरीलाई सम्बोधन गर्दै डा. गोविन्द केसीले भने, ‘म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, जसले न्याय बिक्री गरेर देशै लुटिरहेको छ, न्यायको बलात्कार गरिरहेको छ । त्यसको विरुद्ध लडेको नागरिकको हैसियतले, ठीक छ भनेर बुझ्नुहोला । उसको आदेश म पालना गर्दिनँ, तर तपाईंहरू आएका हिसाबले देशको नियम, कानुनको र तपाईंहरूको कदर गर्दै म जान्छु । तर, आपराधिक आदेश दिने प्रधानन्यायाधीशको आदेश मान्दिनँ ।’
अर्जुन अधिकारी, निराजन पौडेलले आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार लेखेको छन ।
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको दबाबमा सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिनको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेपछि असन्तुष्ट प्रा.डा. शशि शर्मा १ फागुन ०७० मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । त्यसयताका ४६ महिनामा ३६ पटक उनको पेसी तोकिएको थियो । तर, ३५ पटक स्थगित सुनुवाइ ३६औँ पटकमा आइतबार सम्पन्न भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले प्रा.डा. शर्मालाई डिनमा पुनर्बहाल गर्न आदेश दिएपछि प्रा.डा. गोविन्द केसी अदालतविरुद्ध प्रतिक्रियामा उत्रिएका थिए । सर्वोच्चको पैmसलाविरुद्ध बोलेको र न्यायाधीशको अवहेलना गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको छ ।